घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू आइवरी कोस्ट फुटबल खेलाडीहरू Yves Bissouma बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Yves Bissouma को हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बचपनको कथा, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन कारहरू, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
यो येभ्स बिस्सूमाको जीवन कालको शुरुको दिनदेखि नै प्रसिद्ध भएदेखि लिएर संक्षिप्त प्रस्तुति हो। तपाईंलाई बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उहाँको जीवन र क्यारियरको प्रगति को चित्रण सार हो।
Yves Bissouma जीवनी। कुनै एक देखि एक नायक को लागी आफ्नो जीवन ईतिहास हेर्नुहोस्।
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो हो ब्राइटनको लडाई मिडफील्डर जसले हड्डी संकुचन गर्ने चुनौतीहरू राख्छ। यद्यपि, केहिले उनको जीवनी पढेका छन्, जुन अत्यन्त आकर्षक छन्। थप विज्ञापन बिना, हामी सुरु गरौं।
Yves Bissouma बचपन कहानी:
आत्मकथा उत्साहीका लागि, उनको उपनाम जोकोरा हो। येवे बिस्सूमा अगस्त १ 30 1996। को th० औं दिनमा आइभरी कोस्टको इस्सिया शहरमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्ना माता-पिता, श्रीमती र श्रीमती बिस्सुमामा जन्मनुभएको थियो।
Yves बिस्सूमा परिवार मूल:
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, जब तपाइँ जोकोराले मालीको बारेमा बोलेको उत्कट सुन्नुभयो, तपाईं सोच्नुहुनेछ कि उहाँ मलियन हुनुहुन्छ। यद्यपि इस्सिया मूल निवासी आइभरी कोस्टबाट हो र उसको परिवारको जरा कोट डि आइभोरमा स्थापना भएको छ।
Yves Bissouma एक Ivorian र इस्शियाको मूल निवासी हो।
वास्तवमा, सोकर ताराले आफ्नो बाल्यावस्थाको अधिकांश भाग (१२ वर्ष) आइभोर कोस्ट, अबिजानको योपोगन सिसोगी जिल्लामा हुर्के। बिस्सूमाको बाल्यावस्था खेलकुद पालन-पोषणको मिश्रण हो जुन मार्गनिर्देशन सिद्धान्तहरूसँग प्रतिभा पर्याप्त छैन।
“म बच्चा जस्तै प्रतिभाशाली थिएन। जे होस्, म द्रुत रूपमा थाँहा थिए कि व्यक्ति गुणहरूसँग जन्मेका छैनन् तर सफल हुन कडा परिश्रम गर्न सक्छन्। त्यसकारण, म प्रतिभाशाली भन्दा बढी साहसी हुन रोजें। ”
Yves Bissouma परिवार पृष्ठभूमि:
वास्तवमा, यसले बच्चाको लागि सपना देख्न र कडा मेहनत गर्न धेरै साहस लिएको थियो। उनका आमा बुबा गरीब थिए र उनको सफल हुने सम्भावना स्लिम थियो। भाग्यवस, ऊ ग्रिट थियो र पीस कसरी गर्ने जान्छ। उसको अनुसार:
“म धेरै गरिब परिवारबाट आएको हुँ। म यसको बारे लगातार सोच्दछु। यसले मेरा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न बल दिन्छ। ”
Yves Bissouma फुटबल कहानी:
तत्कालीन फुटबल उत्साही उनी अबिडजानको योपोगोन सिसोगी जिल्लाका धेरै क्लबहरूको एक हिस्सा थियो, जहाँ उनी हुर्किए। भाग्यवस, उनको प्रारम्भिक फुटबल सments्लग्नताले उनलाई अबिजान कनिष्ठ क्लब मजेस्टिक एससीमा पुर्‍यायो जहाँ भाग्य उनी मुस्कुराए।
के तिमी उसलाई केटाहरूको बीचमा भेट्न सक्छौ? ऊ दायाँबाट तेर्सो खडा छ!
कसरी? बिसाउमाको टोली मालीको बामाकोमा टूर्नामेन्टमा गएको थियो र उसले राम्रो प्रदर्शन गर्यो। प्रतियोगिताको अन्त्यमा, युवा र others जनाले JMG एकेडेमी बामकोमा सम्मिलित हुन आमन्त्रित गरे।
फलस्वरूप, तत्कालीन १-बर्षे बुडेले अर्को आमामा आफ्नो फुटबल क्यारियरको अनुसरण गर्न आफ्ना आमाबुबालाई बिदाइ गर्नुभयो। उसको अनुसार:
"यो मेरो आमा बुबा छोड्न गाह्रो थियो किनकि म सधै उनीहरूप्रति समर्पित छु। यद्यपि मैले आफैलाई सल्लाह दिएँ कि 'मामा र पापाले मेरो लागि राम्रो काम गर्नुभयो। त्यसकारण मैले उनीहरूलाई देखाउँनु पर्छ कि उनीहरूको प्रयास नालीमा जान्छन्। ”
मालीमा आफ्नो प्रारम्भिक क्यारियरको समयमा युवा मिडफिल्डर हेर्नुहोस्।
वास्तवमा, बिसुमा आफ्ना आमा-बुबालाई गर्व गर्नका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। वास्तवमा क्लबको पहिलो टोलीमा उनीहरुको वृद्धि सुपर मेटोरिक थियो। त्यस्तै, मिडफील्ड मास्ट्रोको रूपमा उहाँसँग द्रुत बृद्धि भएको थियो जसले लिललाई स्वीकार्नको लागि खुला गर्‍यो।
Yves Bissouma जीवनी - प्रख्यात कथाको लागि मार्ग:
जब युवा खेलाडी २०१ 2016 मा युरोप आइपुगेका थिए, उनीसँग मौसमको अवस्थाका साथ कठिन समय थियो। उसको अनुसार:
“म यसलाई भयानक रूपमा वर्णन गर्दछु। वास्तवमा, मेरा हात र खुट्टाहरू प्रायः त्यस्तो चिसो हुन्थ्यो जुन म प्रशिक्षणलाई बन्द गर्न चाहन्थें, "उनी सम्झन्छन्।
दुर्भाग्यवस, जब उसले आफ्नो खुट्टा फेला पारेको थियो, लिलीको पूर्व प्रशिक्षक मार्सेलो बाइल्सा उसलाई दायाँ पछाडि रूपान्तरण गर्न बेन्च थियो। भाग्यवस, उनी एक मिडफिल्डर रहे, लिलले बिगार्न रोक्न मद्दत गरे र पावल पोग्बासँग तुलना गर्न थाले।
उसको हेयरस्टाइल लगायत सबै चीज पोग्बासँग तुलना गरे।
Yves Bissouma सफलता कहानी:
Yves Bissouma को बचपनको कहानी र जीवनी मा यो टुक्रा ड्राफ्ट समय को लागी छिटो, उहाँ ब्राइटन र हभ Albion संग एक स्थापित स्टार हो। चाखलाग्दो कुरा के हो भने, बिसुमा आर्सेनललाई माया गर्छिन् र आफ्ना साथीहरुलाई उनी हुनुहुन्छ भनेर बताउछिन् ग्यानर्स स्विच बनाउन उत्सुक.
भलाइ धन्यवाद, उहाँ प्रीमियर लिगमा हेर्न रमाईलो गर्दै हुनुहुन्छ र उत्तर लन्डन उनको समायोजन गर्न पाउँदा खुसी हुनेछन्। वास्तवमा, ब्ल्याकपूलको बिरूद्ध ब्राइटनका लागि उनको y० यार्डको गोल आर्सेनललाई विश्वास दिलाउनको लागि पर्याप्त छ कि उनीहरूले एक उत्तम प्रतिभा पाएका छन्।
निरन्तर सफलताको आश्वासन हुन्छ जहाँ जहाँ उसको क्यारियरले उनलाई अगुवाई गर्छ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
यवेस बिस्सूमा गर्लफ्रेंड को हुन् पत्नी?
Zokora केवल २ years वर्ष पुरानो हो। यदि हामीले तपाईंलाई उहाँको प्रेमिकाको श्रीमती बनेको भन्यौं भने तपाईं कस्तो प्रतिक्रिया देखाउनुहुन्छ? साथै, बच्चा छ भनेर थाहा पाउँदा के तपाईं चकित हुनुहुनेछ? Yves Bissouma सम्बन्ध जीवनमा स्वागत छ। हामीले अघि नै भनेझैं ऊ बच्चा भएको एक विवाहित मानिस हो। मिडफिल्डरको निजी जीवनको रक्षाको लागि प्राथमिकतालाई धन्यवाद छैन, हामीलाई थाहा छैन उनकी श्रीमती को हुन्।
Yves बिस्सूमा को हुनुहुन्छ?
हामी केवल यो आशा गर्न सक्छौं कि ब्राइटन प्रबन्धक क्रिस ह्युटनले उक्त कुरा प्रकट गर्यो। ऊ फुटबल तारामा दोस्रो बुबा जस्तो छ। वास्तवमा, जब बिसुमा इ England्ल्याण्ड आइपुगे, हग्टनले आफ्नी श्रीमती र बच्चाको लागि भिसा सुरक्षित गर्न मद्दत गरे कि उनी प्रिमियर लिगमा खेल्न सहज भए।
Yves Bissouma पारिवारिक जीवन:
त्यहाँ Zokora अविश्वसनीय काम दर को एक गोप्य कुरा छ। यो परिवार भनिन्छ खुला रहस्य हो। हामी तपाईलाई Yves बिस्सूमाका आमा बुबा र भाइबहिनीको बारेमा तथ्यहरू ल्याउँदछौं। हामी यहाँ उनीहरुका आफन्तहरु बारे तथ्यहरु पनि बनाउनेछौं।
Yves बिस्सूमा अभिभावकको बारेमा:
हामीले हास्यास्पद गरिरहेको थिएन जब हामीले भन्यौं कि खेलाडीको सफलताको पछाडिको परिवार गोप्य हो। के तपाईंलाई थाहा छ बिस्सूमाका आमा बुबाले उनका प्रत्येक खेलहरू हेर्छन्? साथै, तिनीहरू सँधै सम्पर्कमा हुन्छन्। उहाँ आफ्ना बाबुआमाको अस्वाभाविक समर्थनको बारेमा सँधै सजग हुनुहुन्छ र उनीहरूको अनुहारमा निराशा दर्ता गर्न सक्दो प्रयास गर्नुहुन्छ।
Yves Bissouma एक महिलासँग जुन यो आमाको लागि पास हुन सक्छ।
Yves बिस्सूमा भाई बहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे:
फुटबलरले अझै भाई-बहिनी भएको बताएको छैन। न त उनले आफ्नो नजिकको पारिवारिक जीवन भन्दा पनि कदर गर्दछ कि सम्बन्ध प्रकट गरेको छ। तसर्थ, हामी केवल आशा राख्न सक्छौं कि उहाँ निकट भविष्यमा आफ्ना हजुरबा हजुरआमा, काका, काकी, भतिजा र भतिजाको कुरा गर्नुहुन्छ।
Yves Bissouma व्यक्तिगत जीवन:
जसरी फुटबलरहरू अनुहारहरू फरक हुन्छन्, त्यस्तै तिनीहरूको चरित्रको सामग्री अफ-पिच हो। यो प्रश्न उठ्छ, पिच बाहिर फुटबलर को हो? के हामी भेला गर्न सक्छौं बाट, बिस्सूमा एक सजीलो खेलाडी हो।
उहाँ सामानहरू राख्न मन पराउनुहुन्छ र आवश्यक भन्दा बढी बोल्नुहुन्न। यद्यपि खेलाडी उसको बाल्यकाल र उसको बृद्धिमा अभिभावकको योगदानको बारेमा मुखर रहेको छ, हामी यस तथ्यलाई इन्कार गर्न सक्दैनौं कि उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा बढी तथ्य खुलाउन खुला हुनुहुन्न।
सरल दिमाग, निजी र शान्त वास्तवमा उनीहरूले तिनीहरूलाई बिसाउमा जस्तो गर्दैनन्।
जे होस्, उसले सोख र रुचि के हो भनेर पत्ता लगाउन सजिलो छ। उसको क्यालिबरका खेलाडीले गुणस्तरीय छुट्टी र यात्राको बारेमा बहाना बनाउँदैन। कसले संसारलाई हेर्न र जीवनको विलासिताको आनन्द लिन चाहँदैन? पक्कै बिस्सूमा होईन! ऊ आफ्नी पत्नी र आमा बाबुको बारेमा बोलेको जुनसुकै कुराको आधारमा, हामी शर्त लगाउन सक्छौं कि उहाँ उनीहरूसँग समय बिताउन कदर गर्नुहुन्छ।
Yves बिस्सूमा जीवन शैली:
जब फुटबल तारा एक मर्सिडीज एसयूवी ईन्धन भरिएको देखा पर्‍यो, धेरैले छिटो सोचेका थिए कि उनीसँग वास्तवमै यो सवारी छ कि छैन भनेर। यस अनुमानका बीचमा, बिशौमा M मिलियन यूरो (२.3 मिलियन पाउन्ड) को खातालाई ध्यानमा राख्दै सचेतकहरू असफल भए। न त उनीहरूलाई थाँहा छ कि उसले वार्षिक £ १2.6००,००० र and २,1,300,000,००० कमाउँछ।
Yves Bissouma आफ्नो कार ईन्धन भरिरहेको छ।
आशा छ, यदि उसको आर्सेनल ट्रान्सफर सफल भयो भने उत्तर लन्डनमा ऊ ठूलो घर वा अपार्टमेन्टमा बस्छन् भन्ने देखेर तपाईं छक्क पर्नु हुन्न। सबैभन्दा माथि, हामी खुशी छौं कि तपाईले बुझ्नुभयो बिस्सूमा सचेत छ कि जीवनको आनन्द लिनुपर्दछ, र त्यसमा उहाँ विलासी जीवनशैली बिताउनुहुन्छ।
Yves बिस्सूमा बारे तथ्यहरू:
Zokora बचपन कहानी र जीवनी मा यो लेख लपेट्न, यहाँ उनको बारेमा कम ज्ञात वा अनटल्ड तथ्यहरू छन्।
तथ्य # १ - वेतन र प्रति सेकेन्ड कमाई:
प्रति वर्ष: £ 1,300,000।
प्रति महिना: £ 108,333।
प्रति हप्ता: £ 25,000।
प्रति दिन: £ 3,571।
प्रति घण्टा: £ 149
प्रति मिनेट: £ 2.48
प्रति सेकेन्ड: £ 0.04
Yves Bissouma's हेर्दै बायो, यो उसले ब्राइटनसँग कमाएको हो।
तथ्य # १ - धर्म:
श्रीमती र श्रीमती बिस्सूमाका छोराले भगवान भनिने अलौकिक अस्तित्वमा विश्वास गर्दछन्। साथै, अनौंठो कुरा उहाँलाई एक जना मसीहीको पक्षमा छ। विशेष गरी जब तपाईं तलको फोटो अध्ययन गर्नुहुन्छ।
उसले यहाँ जपमा लगाएको छ जसले इसाई र क्याथोलिक धर्मको चिच्याउँछ।
तपाईले कहिले पनि बुझ्न सक्नुहुन्न कि कसरी Yves Bissouma लाई अन्डररेट गरिएको छ जबसम्म तपाईले उसको फिफा रेटिंग 75 82/XNUMX२ देख्नुहुन्न। आशा छ, अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण यस अन्यायतर्फ आकर्षित गरिएको छ र माथिल्लो समीक्षा एकदमै नजिक छ।
एक माथिल्लो समीक्षा आसन्न छ।
तथ्य # १ - Yves बिस्सूमा उपनाम को बारे मा:
मिडफिल्डरको उपनाम जोकोरा हो किनभने उसले पहिलेको कोटे डि आइवर इन्टर्नेशनल डिडिएर जोकोरालाई माया र सम्मान गर्दछ। उसको अनुसार:
“म उसको खेलको शैली कल्पना गर्छु। ऊ डिफेन्समा राम्रो छ र कडा मेहनत गर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले उस्तै शिक्षा पाएका छौं किनकि उनले जीन मार्क गुइलो अकादमीमा ग्रेभ गरे तर अर्कै देशमा भए पनि। ”
तथ्य # १ - शान माइकलसँग तुलना:
किनारसँग तुलना गरिएको छ पल पोगाबा, कसले विश्वास गर्छ कि एक खेलाडी को तुलना खेलाडी गर्न सक्छन्? Yves Bissouma अनुहारमा जमिन लुइसलाई लात हिर्काउनेको लागि WWE किंवदंती शन माइकल्ससँग तुलना गर्नुहोस्। प्राविधिक रूपमा, यो एक प्रयास फ्लिक गलत गलत भयो। भाग्यवस, जमाल यसबाट बाँचे।
ऊ वैकल्पिक ब्रह्माण्डमा पहलवान हुन सक्छ।
पूर्ण नामहरू: Yves Bissouma।
जन्म मिति: अगस्त १ 30 1996। को नौौं दिन।
जन्मस्थान: आइवरी कोस्टमा इस्सिया।
सेमी मा उचाई: 182 सेमी।
खेल्ने स्थिति: मिडफिल्ड।
बच्चाहरु: हो, एउटा बच्चा।
कुल मूल्य: M १० मिलियन
Yves Bissouma को बचपनको कहानी र जीवनी मा यो जानकारीमूलक अंश पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी आशा गर्छौं कि मिडफिल्डरको मालीको बस्तीबाट प्रिमियर लिग सम्मको यात्राले तपाईंलाई केहि पनि असम्भव छैन भनेर विश्वास गर्न प्रेरित गरेको छ। बिस्सूमाले आफूले पाएको स्तर हासिल गर्न कडा परिश्रम गरेर सबै नराम्रा चीजहरू बहाए।
मिडफिल्डरका आमा-बुबाको शब्द र कार्यहरूमा उनको फुटबल क्यारियरलाई समर्थन गरेकोमा उनीहरूको प्रशंसाको लागि यो मोवाँमा हामी सुन्दर छौं। Lifebogger मा, हामी सटीकता र निष्पक्षता संग बचपन कथाहरू र जीवनी तथ्या deliver्क वितरित मा गर्व गर्दछौं। यदि तपाईले केहि देख्नु भयो कि ठीक जस्तो लाग्दैन भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल सन्देश पठाउनुहोस्।
ब्राइटन र हभ एल्बियन फुटबल डायरी